एक हप्ता लम्बियो उपत्यकाको निषेधाज्ञा, के गर्न पाइने के नपाइने ? « Mero LifeStyle
अब खोप प्रमाणपत्र कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने
हरिवंश र मेलिनाको ‘माछीलाई खोलीको लेउ’ युट्युब ट्रेण्डिङको शीर्ष स्थानमा
मेलम्ची बाढी अपडेट : चनौटेको रातो पुल पनि बगायो
मेलम्चीमा पुनः बाढी– रेडियो मेलम्चीको भवन ढल्यो, ग्याल्थुमको झोलुङ्गे पुल…
श्वास गन्हाउने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुस्
मेलिना भन्छिन् – कलेज पढ्दा निकै सोझी थिएँ
आश्माका फ्यान : प्रेमप्रस्ताव राख्नेदेखि आश्मा चाहियो भन्दै रुनेसम्म
मेरो लाइफस्टाइल	|| 20 June, 2021
काठमाडौं उपत्यकामा थप एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा बढाइएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको मोडालिटी केही परिवर्तन गरेर असार १४ गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याएको हो ।
अब बार अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार आइतवार, मंगलवार र बिहीवार सुनचाँदी, भाँडा, विद्युतीय, घरायसी सामान बिक्री गर्ने पसल सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै, अटोमोबाइल र त्यसका पार्टपूर्जा पाइने पसल पनि खुल्नेछ ।
सोमवार, बुधवार र शुक्रवार सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता पसल खोल्न दिने निर्णय भएको छ । यस्तै फेन्सी, कस्मेटिक, गिफ्ट र टेलरिङ खुल्नेछन् ।
बारका आधारमा खुल्ने पसल बिहान ११ देखि ४ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय भएको प्रजिअ पराजुलीले बताए । खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी पसल हरेक दिन ११ बजेसम्म खुल्नेछ । त्यस्तै विवाह तथा ब्रतवन्धको हकमा बढीमा १० जनासम्म भेला हुने पाइने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्णय गरेको छ ।
निजी सवारीसाधनमा जोर बिजोर
८ गतेबाट निजी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी चलाउन पाइनेछ । जसअन्तर्गत कार जीप र भ्यानमा बढीमा ४ जना, ट्याक्सीमा ३ जनामात्र राख्न पाइने जनाइएको छ ।
रातभरमै बगर बन्यो मेलम्ची : २ को मृत्यु, १५ जना सम्पर्कविहिन (ड्रोन तस्बिर)
सरकारले कोभिड–१९ खोप प्रमाणपत्रको कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी) ले आइतबार स्वास्थ्य तथा
पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना बढ्दो छ । एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विसं २०७२ सम्म विपद्का दुई हजारभन्दा कम
पछिल्लो समय वैवाहिक वर्षगाँठ तथा जन्मोत्सव कार्यक्रमका नाममा फजुल खर्च गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । तर, यस्ता उत्सवमा हुने
शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले चनौटेको रातो पुल बगाएको छ । स्थानीयवासी हस्त पण्डितका अनुसार आज बिहान ७ः४५ बजे पुल बगाएको
टन्सिलबाट बच्न के गर्ने ?
गायक महेश काफ्लेको नजरमा पढ्नै पर्ने तीन पुस्तक
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सद्भावना दूतमा सुनिता दुलाल र प्रकाश सपुत नियुक्त (भिडियोसहित)
सम्झनामा विपी कोइराला